St Johns Wort nencindi - J & S Botanics
[Igama Latin] Hypericum perforatum
[Plant Umthombo] Ukusuka China
[Inkangeleko] Brown ngumgubo ocolekileyo
[Iinkcukacha] 0.3% Hypericin
[Isinyithi esindayo] ≤10PPM
[Yintoni Wort St. kaYohane]
Wort St. kaYohane (Hypericum perforatum) unembali yokusebenzisa nje ukuthandana amayeza emva eGrisi yamandulo, apho asetyenziselwa uluhlu izifo, kuquka zezigulo ezahlukeneyo luvo. Wort St. kaYohane kananjalo antibacterial, antioxidant, kunye neempawu antiviral. Ngenxa yayo anti-ukudumba, iye isetyenziswe ukunceda ndiyipholise imivumbo nokutsha nolusu. Wort St. kaYohane yenye yezona mveliso eengcambu kakhulu ngokuqhelekileyo ezithengwe eUnited States.
Kwiminyaka yakutshanje, Wort St John uye wafunda ngokubanzi nje unyango nokudakumba. amaphononongo abonisa ukuba Wort St. John unokunceda zokunyanga uxinzelelo enomoya-to-alungise, kwaye iziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa kakhulu ezinye yokunciphisa imithi.
1. iipropati Anti-edakumbisayo kunye umthomalalisi;
2. ngeyeza efanelekileyo luvo, kwempixano iphumle, kunye ixhala kunye nokuphakamisa imimoya;
4. Ukuphuculwa capillary kwegazi
Previous: yeembotyi zesoya luthathe
Next: Stevia extract
Hypericum perforatum luthathe
St.John kaThixo Wort Extract
Khipha Tribulus terrestris
White Willow Bark Isicatshulwa